कस्तो छ मिस्टर झोले ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
कस्तो छ मिस्टर झोले ?
काठमाडौँ, २८ पुस । रामबाबु गुरुङ निर्देशित ‘मिस्टर झोले’ शुक्रबारदेखि सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको छ । फिल्ममा दयाहाङ राई, दीया पुन, बर्षा राउत, बुद्धि तामाङ, अरुणा कार्की, विजय बराल, कमलमणि खतिवडा लगायतको अभिनय रहेको छ । प्रदर्शनको पहिलो दिन विहानी शोमा काठमाडौँको कुमारी हलमा प्रेस शोको आयोजना समेत गरिएको थियो ।
कस्तो छ फिल्म ?
निर्देशक रामबाबुका अघिल्ला फिल्म जस्तै यो मिस्टर झोले पनि ग्रामिण परिवेशकै वरिपरि घुमेको छ । गाउँकै सामान्य घटनाकै वरिपरि यो फिल्म सकिन्छ । दुई युवतीका लागि युवाबीच हुने संघर्ष यो फिल्मको मुख्य विषय हो । तर युवती बीच हुने द्वन्दकै सेरोफेरोमा फिल्मले अन्य सामाजिक गतिविधिलाई पनि उठाएको छ । कानुनीरुपमा अवैधानिक मानिए पनि जातीय भेदभावको अन्त्य सामाजिकरुपमा अझै हुन सकेको छैन । यो विषयलाई पनि फिल्मले आत्मसात गरेको छ । तर जातीय मुद्दाकै सन्दर्भमा समाजमा रहेको पछिल्लो दुई स्वरुप फिल्ममा देख्न सकिन्छ । कानुनीरुपमा अवैध मानिए पनि समाजको एउटा पाटोले जातीय विभेदलाई सहर्ष स्वीकार गर्न सकेको छैन । त्यस्तै समाजकै अर्को तप्काको प्रतिनिधित्व गर्ने मास्टरको रुपमा एकपात्रा पात्र छन् जसले जसका निम्ति जातीय विभेद केही पनि होइन । यस्तै यस्तै परिवेश र कथानक स्वरुप ‘मिस्टर झोले’मा देख्न सकिन्छ ।
प्रेस शोको प्रतिक्रिया
प्रेस शोमा यो फिल्मले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । कथानाक निरन्तरता राम्रो भए पनि यो फिल्म रामबाबुको अघिल्लो फिल्म कबड्डीको ह्याङओभरबाट बाहिर जान नसकेको प्रतिक्रिया अधिकांस सञ्चारकर्मीले गरेका छन् । यद्यपी अहिलेको पछिल्लो परिस्थितिको ग्रामीण जनजीवनलाई भने फिल्मले दुरुस्तै उतार्न सकेको प्रतिक्रिया पनि यो फिल्मले पाएको छ । फिल्म भित्र रहेको कमेडी सम्बादले पनि दर्शक बाँध्न सक्ने सञ्चारकर्मीको प्रतिक्रिया थियो ।
सारा अली खान र सुशान्तसिंह राजपुतको प्रेमले ततायो बलिउड
जाह्नवी कपुरको पहिलो होश उडाउने फोटोशूट (फोटोफिचर)
पूनम पाण्डे भन्दा हट आयशा
प्रथम एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड सम्पन्न
अब मेलम्चीको बाँकी काम नेपाली सेनालाई दिने तयारी
प्रियङ्का चोपडा निर्मित नेपाली फिल्म ‘पाहुना’ युट्युबाट सार्वजनिक-भिडियो सहित
लगानी सुनिश्चित नहुँदै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासका रुख कटान नगर्न सुझाव
विश्व समाचार : पर्खाल होस् कि नहोस्, सीमा पार गर्न आतुर छन् अाप्रवासीहरु